Ngaba ungumenzi okanye umrhwebi?
A: Singumvelisi onamava angaphezulu kweminyaka eli-15 kwisihlanganisi se-xlr, i-xlr audio combo jack, i-jack audio, i-6.35 jack, isokhethi yesinxibelelanisi, isixhobo sokuxhuma i-powercon, i-dc jack, i-rca jack, i-ac jack, iswitshi sokutshintsha eTshayina.
Q2.When Ndingalufumana kowuteshini?
A: Sihlala sicaphula kwiiyure ezingama-24 emva kokuba sifumene umbuzo wakho. Ukuba ungxamise kakhulu ukufumana ixabiso, nceda usitsalele umnxeba ngokuthe ngqo okanye usixelele nge-imeyile ukuze sikwazi ukujongana nophando lwakho ngokubaluleka.
Umbuzo. Yintoni ixesha phambili?
A: Izinto zesitokhwe, ukuthumela ngenqanawa ngaloo mini kanye emva kokuba intlawulo ifunyenwe; izinto zemveliso, inqanawa ngaphakathi 5-10days.
Umbuzo Ngaba ikhona i-MOQ?
A: Akukho MOQ yemodeli eqhelekileyo kunye nemibala; kodwa kukho i-MOQ ye-10000pcs yemibala eyenziwe ngokwezifiso.
Uthini umgaqo-nkqubo wakho wesampulu?
A: Sixhasa iisampulu SIMAHLA, kodwa imali yokuthumela ifikelela kubathengi.
Q6.Uyithumela njani iodolo yam?
A: Iphakheji encinci, siya kuyithumela nge-Express, njenge-DHL, FedEx ,, UPS, TNT, EMS. YINKONZO YENKONZO EMNYANGO. Kwiiphakheji ezinkulu, siya kuzithumela ngenqwelomoya okanye ngolwandle njengoko kuvunyelwene.
Umbuzo 7. Loluphi uhlobo lwentlawulo olwamkelayo?
A: Samkela iT / T (ukuhanjiswa ngocingo) kwi-USD okanye kwi-RMB; sikwaxhasa intlawulo ngeALIBABA.
Q8.How ulawulo lomgangatho wakho njani?
A: Sineqela leQC lobuchwephesha (banamava ngaphezulu kwe-10year-amava ngokomndilili)
Sigcina ulawulo oluluqilima kwimveliso evela kwizinto ezingavunyelwanga ukugqiba imveliso nganye. Inkqubo yokusebenza ibekwe iliso ziingcali zethu ukuqinisekisa umgangatho ophezulu weendawo zethu.
Q9.Ndinotyelelo kumzi-mveliso wakho ngaphambi komyalelo?
A: Ngokuqinisekileyo, wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu.
Umbuzo10. Ngaba ukuxhasa OEM kunye ODM?
A: Ngokuqinisekileyo, sinako!
Ngaba Ukulungele Ukusebenza Nathi? Emva koko nceda ucofe